Magaalada Saint Paul waxay ku dhawaaqday mamnuuca in baabuurta la dhigto hal-dhinac jidadka la daggan yahay ee iminka la hirgeliyo. | Saint Paul, Minnesota
Magaalada Saint Paul waxay ku dhawaaqday mamnuuca in baabuurta la dhigto hal-dhinac jidadka la daggan yahay ee iminka la hirgeliyo.
Khariidada Mamnuuca in hal-dhinac la dhigto
LAMA ogola in baabuurta la dhigto dhinaca nambarada TOGAN (EVEN) ee dhamaan jidadka meelaha la DAGGAN yahay laga bilaabo duhurnimada maalinta Isniinta, Maarso 4 ilaa Abriil 1.
Dadka daggan waa in ay baabuurta dhigtaan dhinaca namabarada taban (odd side) jidadka la daggan yahay iyo waa in ay u hoggaansamaan xayiraadda caadiga meelaha la dhigto baabuurka jidadka halbowlaha (jidadka muhiimka ah). Fiiri khariidada Xayiraadda 1ka-Dhinac Meelaha la Dhigto Baabuurta Xilliga Qaboobaha si aad u ogaatid meesha la dhigto.
Ammaanka dadkena daggan waa mudnaanta ugu sarreyso magaaladena, waxaana ka mid ah hubsashada in jidadka yahiin ammaan iyo in ay mari karaan dhamaan baabuurta degdegga. Barafka badan awgeed, waxaa cariiri noqday jidad badan. Si loo ilaaliyo ammaanka dadweynaha, magaalada waxay mamnuucday in baabuurta la dhigto hal-dhinac dhamaan jidadka meelaha la daggan yahay si loo hubsado in baabuurta degdegga ay si ammaan ah ku gaaraan jidadka.
Fadlan u hoggaansan dhamaan sharciyada meelaha la dhigto baabuurka, hanna xerin meelaha laga galo guryaha, luuqyada ama isgoysyada.
Haddii lagu dhawaaqo Degdegga Barafka inta uu jiro mamnuuca halka-dhinac ee baabuurta la dhigto, si ku meelgaar ah ayaa loo joojin doonaa mamnuuca meelaha la dhigto baabuurta, waxaana la hirgelin doonaa sharciyada Degdegga Barafka meelaha la dhigto baabuurka. Si aad u heshid macluumaad badan oo ku saabsan hawlaha barafka, booqo stpaul.gov/snow.
Xaggee ayaan dhigtaa baabuurka?
Fiiri khariidada Xayiraadda 1ka-Dhinac Meelaha la Dhigto Baabuurta Xilliga Qaboobaha si aad u ogaatid meesha la dhigto. Fadlan si joogto ah u hubso khariidada bacdamaa si joogto ah loo fiiriyo jidadka. Waxaa dhici karto in wax laga baddalo xayiraadda dhigashada baabuurta.
Waa in mar kasta loo hoggaansamo dhamaan xayiraadda lagu soo rogay meelaha la dhigto baabuurta iyo calaamadaha ku meelgaarka ee la soo dhajiyay.
Dhigo baabuurta dhinaca nambarada-taban (odd-numbered) jidadka la daggan yahay.
HA dhiganin dhinaca nambarada TOGAN (EVEN) jidadka la DAGGAN yahay.
Mamnuuca in 1-dhinac la dhigto baabuurta waxaa loogu talogalay Magaalada Saint Paul oo idil.
Ma la hirgeliyaa sharciyada Mamnuuca in Hal-Dhinac la Dhigto Baabuurta marka uu jiro Degdegga Barafka?
Si ku meelgaar ah ayaa loo joojin doonaa in baabuurta la dhigto hal dhinac jidadka inta uu socdo Degdegga Barafka.
Si aad u heshid macluumaad badan oo ku saabsan hirgelinta sharciyada u dagsan meelaha la dhigto baabuurka xilliga Degdegga Barafka - booqo stpaul.gov/snow.
Tusaale ahaan: Haddii Magaalada Sainta Paul ku dhawaaqdo Degdegga Barafka maalin Axad, halkan ka fiir sida ay wax yeeli doonaan:
Maalinta Axadda marka ay tahay 4 p.m. waxaa la joojin doonaa mamnuuca in hal-dhinac la dhigto baabuurta.
Maalinta Axadda marka ay tahay 9 p.m. waxaa la hirgelin doonaa xayiraadda meelaha la dhigto baabuurta Degdegga Barafka, lama ogolo in baabuurta la dhigto JIDADKA LA XAAQO HABEENKII laga bilaabo 9 p.m.-7 a.m.
Maalinta Isniinta marka ay tahay 8 a.m. waxaa sii socon doonto xayiraadda dhigashada baabuurta Degdegga Barafka, mana la dhigan karo baabuurta JIDADKA LA XAAQO MAALINTII laga bilaabo 8 a.m.- 5 p.m.
Maalinta Isniinta laga bilaabo 5 p.m. ilaa Talaado marka ay tahay 8 a.m. waxaa weli socon doono Degdegga Barafka. Dadka waxay dhigan karaan baabuurta meelaha laga xaaqay barafka, ballaca oo idil.
Maalinta Talaadada marka ay tahay 8 a.m. waxaa la soo gabogabeyn doonaa sharciyada u dagsan meelaha la dhigto baabuurta xilliga Degdegga Barafka. Waxaa dib loo hirgelin doonaa mamnuuca in baabuurta la dhigto hal-dhinac.
Fadlan xasuuso in aad si joogto ah isaga hubisid khariidada halka-dhinac meelaha la dhigto baabuurta stpaul.gov/1SideParkingMap bacdamaa jidadka loo qiimeeyo si joogto ah lana baddali karo xayiraadda meelaha la dhigto baabuurka.
Sidee ayaan ku ogaan karaa dhinaca TOGANAHA (EVEN) jidka?
Fiiri cinwaanka guriga. Dhinaca namabarada TOGAN (EVEN) jidka waa nambarada ku dhamaado 0, 2, 4, 6, ama 8. Haddii nambarka cinwaanka guriga ku DHAMAADO mid ka mid ah nambarada, lana mamnuucay in baabuurta la dhigto meelaha la daggan yahay dhinacaas jidka (xariiqanta dhibcaha gaduudan khariidada), ha dhiganin baabuurka dhinacaas jidka.
Caadi ahaan, nambarada TOGAN (EVEN-numbered) waxaa laga helaa dhinaca koofur ama dhinaca bari.
Maxaa loo jeedaa xariiqmanka baluugga iyo xariiqmanka gaduudan ee dhibcaha leh ee ku yaal khariidada 1ka-dhinac la dhigto baabuurta.
Dhibcaha xariiqmanka gaduudan waxay tilmaamaan jidadka meelaha laga mamnuucay in la dhigto baabuurta dhinaca TOGAN (EVEN). Dhibcaha xariiqmanka gaduudan MA muujiyaan dhinaca jidka loo baahan yahay in la dhigto baabuurta. Fadlan fiiri cinwaanka guriga si aad u ogaatid dhinaca TOGAN (EVEN numbered) jidka.
Xariiqanta baluugga waxay mattashaa jidadka waaweyn ama jidadka la daggan yahay halkaas oo looga baahan yahay in dadka u hoggaansamaan sharciyada caadiga ee la soo dhajiyo kuna saabsan meelaha la dhigto baabuurta iyo xayiraadaha.
Fadlan xasuuso in xariiqmanka dhabta ee ku yaal khariidada MA tilmaamaan dhinaca jidka la dhigto baabuurta, waxay ka hadlaan oo keliya xayiraadda dhigashada baabuurta ee loo baahan yahay in loo hoggaansamo.
Maxay tahay sababta aan calaamadaha meelaha la dhigto baabuurta loogu soo dhajinin jidkeyga? Waajib miyay igu tahay in aan u hoggaansamo?
Haa Waa in mar kasta loo hoggaansamo dhamaan xayiraadda lagu soo rogay meelaha la dhigto baabuurta iyo calaamadaha ku meelgaarka ee la soo dhajiyay.
Asbaabta ka dambeyso soo-gelinta calaamadaha ku meelgaarka: in boos laga soo saaro jidadka cariiriga ah, taasoo la xariirta xaaqidda barafka, shaqada ay qabtaan qandaraasleyaasha gaarka ah ama danabka, shaqada dareerinta roobka bullaacadaha, shaqada jaridda geedaha, iwm.
Dadka dhigta baabuurta meelaha lagu soo dhajiyay calaaamadaha dhigashada baabuurta waxaa dhici karto in la siiyo tigidh iyo in laga jiido baabuurka.
Aniga waxaan haystaa calaamadda meelaha uu baabuurka dhigto qofka itaalka darran, gurigeyga hortiisa, taasoo ku taal dhinaca TOGAN (EVEN) jidka. Ma dhigan karaa meeshaas weli?
Maya. Haddii gurigaada leeyahay calaamadda meelaha uu qofka itaalka darran dhigto baabuurka, kaddibna jidka meelaha la daggan yahay lagu tilmaamo in uu qeyb ka yahay mamnuuca dhigashada baabuurta xilliga qaboobaha, meeshaas ma dhigan kartid baabuurka. Fadlan, adigoo haysta cinwaanka gurigaada, Saint Paul Public Works kala soo xariir publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us ama soo wac 651-266-6100 kaddibna magaaalda waxay iskudayi doontaa in ay si ku meelgaar ah soo dhajiso dhinacyada uu qofka itaalka darran dhigto baabuurka.
Joogto ahaan, jidkeyga waxaa saaran mamnuuca halka-dhinac ee la dhigto baabuurka, hase ahatee waxa la mamnuucay in baabuurta la dhigto dhinaca-taban (odd-side) jidka. Bacdamaa qaboobahaan ay jirto xayiraadda in baabuurta aan la dhigan karin dhinaca-togan (even-side) jidkeyga, hadda ma dhigan karaa baabuurta dhinaca-taban (odd-side) jidka?
Maya. Qof kasta waa in uu u hoggaansamo dhamaan calaamadaha caadiga meelaha la dhigto baabuurta. Fadlan hubso meesha uu uga yaal khariidada 1ka dhinac meelaha la dhigto baabuurta stpaul.gov/1SideParkingMap.
Waxaan ku hawlanahay in aan fiirino dhowr ka mid ah jidadka la daggan yahay ee hoos yimaada xannibaadda meelaha la dhigto baabuurta dhinaca-taban (odd-side). Fadlan sii wad in aad fiirisid khariidada si aad u ogaatid wararkii ugu dambeyay. Haddii xariiqanta tahay baluug, u hoggaansan xayiraadda caadiga meelaha la dhigto baabuurta ee la soo geliyay.
Ma dhici kartaa in baabuurkeyga la siiyo tigidh ama in la jiido haddii uu yaal dhinaca qaldan jidka?
Haa Baabuurta taal dhinaca togan (even) jidadka la daggan yahay ama meelaha lagu soo dhajiyay lama dhigan karo baabuurta waxaa la siin karaa tigidh iyo/ama in la jiido inta ay socoto joojinta dhigashada baabuurta.
Aniga waxaan haysta stikarka ruqsadda meelaha la dhigto baabuurta agagaarka guryaha. Ma dhigan karaa baabuurka meelaha aan ruqsadda u haysto in aan dhigto baabuurka.
Xannibaadda meelaha la dhigto baabuurta jidadka la daggan yahay waxaa laga qaaday xayiraadda xilligaan qaboobaha ee qaboobahaan la mamnuucay dhigashada baabuurta. Dadka daggan ee haysta stikarada ruqsadda meelaha la daggan yahay waxay baabuurka dhigan karaan meelaha kale ee loo ogol yahay.
Ganacsigeyga/ururkeyga waxaa loo qorsheyay 15 daqiiqo waqtiga raridda dhinaca-togan (even-side) jidka, weli ma isticmaali karnaa?
Haa Waa la isticmaali karaa meelaha loo qorsheyay raridda 15ta daqiiqo ee ku yaal dhinaca-togan (even-side) jidadka la daggan yahay hase ahatee baabuurta waa in aan la dhiganin muddo ka badan waqtiga loogu talogalay.
Dhinaca-tabanaha (odd-side) jidka la daggan yahay waxaa loo ogol yahay in la dhigto baabuurta muddo 2 saac keliya. Ma dhigan karaa baabuurka in ka badan 2 saac bacdamaa uu jiro mamnuucaan ku saabsan meelaha la dhigto baabuurta xilliga qaboobaha?
Maya. Waxaa lagu dhaqmaa sharciyada iminka la soo dhajiyay ee ku saabsan meelaha la dhigto baabuurta. Haddii calaamadaha dhigashada baabuurta muddada kooban lagu soo dhajiyo dhinaca-taban (odd side) jidka, waxaa la hirgelin doonaa sharciyada u dagsan dhigashada baabuurka.
Ma loo baahan yahay in la dhaqaajiyo fuustada dhismaha ee taala dhinaca TOGAN (EVEN) jidka?
Haa, waxaa loo baahan yahay in fuustooyinka dhismaha ku sugan jidka ama jidadka loo ogol yahay dadweynaha ee ku yaal dhinaca TOGAN (EVEN side) in loo dhaqaajiyo dhinaca kale jidka.
Goormuu dhamaan doonaa Mamnuuca in baabuurta la Dhigto Hal-Dhinac?
Mamnuuca in baabuurta la dhigto hal-dhinac jidadka waxay socon doontaa ilaa Abriil 1, haddii xaaladaha aysan isbaddalin, iyo magaaladana aysan joojinin goor hore.
Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ay Magaalada Saint Paul ku dhawaaqday mamnuuca dhigashada baabuurta halka-dhinac?
Mamnuuca ugu horeyay halka-dhinac meelaha la dhigto baabuurta wuxuu dhacay Maarso 2014.
One-Sided Parking Ban
Lub Zos Saint Paul tau plov meej tias yuav tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev ntawm cov pej xeem nyob txij li tam sim no mus.
La Ciudad de Saint Paul ha declarado una prohibición de estacionamiento unilateral en las calles residenciales que está actualmente vigente.